लाल्टिन डट कम - Laltin Media - Page 221
Home»Author: लाल्टिन डट कम (Page 221)
नेप्सेमा आज हरियाली, २५ अंकको वृद्धि
By लाल्टिन डट कम February 21, 2022
आज सोमबार २५.४१ अंकले बढेर ०.९४ % वृद्धिको साथ नेप्से २७१८. ५१ अंकमा बन्द भएको छ। कारोबार भएका २२४ कम्पनीमध्ये १५४ कम्पनी उकालो लागेका छन्, ३३ कम्पनी ओरालो लागेका छन् र ४ कम्पनी स्थिर रहेका छन्। कारोबार भएका तेह्र उप-समुहमध्ये सबै उप-समुहको सेयर मूल्य उकालो लागेका छन् । बजार पूँजीकरण बढेर रु ३८ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ। प्रमुख कारोबार प्राविधिक विश्लेषण NEPSE Daily Update: February 21, 2022 प्राविधिक विश्लेषण सूचक १. बोलिन्जर ब्याण्ड आज बोलिन्जर ब्याण्डको अपर र लोवर ब्याण्डको अन्तर घटेको विश्लेषणले देखाउँछ (आजको फरकः २५६ ) जसले बजारमा भोलाटाइलिटी घटेको इङ्गित गर्दछ। बजार आज लोवर ब्याण्ड (२६६६…
सिलसिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा रोजगारी अवसर
सिलसिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले विभिन्न पदमा रोजगारी अवसर खुलाएको छ । संस्थाको रिक्तता विज्ञापन यस प्रकार छ: यस संस्थाका लागि देहाय वमोजिम पदपुर्ति गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सुचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनभित्र रितपुर्वक दर्खास्त आव्हान गरिन्छ। १. पदः प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसंख्या १तहः आठौंआवश्यक योग्यताः व्यवस्थपान विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरि सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिम ५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको वा स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण गरि सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिम ३ वर्षको अनुभव प्राप्त भएको २.पदः व्यवस्थपकसंख्या १तहः सातौंआवश्यक योग्यताः व्यवस्थपान विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरि सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा ३ वर्षको अनुभव प्राप्त भएको ३.पदः लेखा अधिकृतसंख्या १तहः…
चियासँग उमालेको अण्डा खानु खतरनाक
अण्डा एउटा यस्तो खानेकुरा हो जसमा धेरै स्वास्थ्य लाभ हुन्छन् । अण्डाबाट अम्लेटजस्ता विभिन्न परिकार बनाइन्छ। तर, अधिकांश मानिस उमालेको अण्डा खान रुचाउँछन् । प्रायः बिहानको खाजामा चियासँगै उमालेको अण्डा खाने गरेको देखिन्छ । तर के तपाईलाई थाहा छ चिया र उमालेको अण्डाको संयोजन स्वास्थ्यका लागि कति खतरनाक छ भनेर ! उमालेको अण्डा खानुका फाइदा धेरै छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । उमालेको अण्डा प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो। यसको सेवनले शरीरको वृद्धिलाई मद्दत गर्छ। यो क्याल्सियमको भण्डार पनि हो जसको कारण तपाईको हड्डीलाई क्याल्सियम मिल्छ र ती मजबुत हुन्छन्। अण्डाले मेटाबोलिजम बढाएर तौल नियन्त्रण गर्न पनि मद्दत गर्छ। जर्नल…
मललाई हरित ऊर्जामा परिणत गर्ने शौचालय
धेरैजसो ट्वाइलेट मोडेलहरूले धेरै पानी प्रयोग गरी दिसा-पिसाब सफा गर्छन्। यसको सट्टा बिभी शौचालयले भूमिगत बायोरिएक्टरमा चिसो चुस्न भ्याकुम पम्प प्रयोग गरी कम पानी प्रयोग गर्दछ। ऊर्जा उत्पादन गर्ने शौचालयको प्रणाली फ्लस गर्न मिल्ने शौचालयभन्दा धेरै सानो छ किनकि यसले पानी प्रयोग नगरी मानव मलमूत्र सफा गर्दछ। यस नविन प्रणालीले मानव फोहोरलाई निर्जलित गन्धविहीन कम्पोस्ट-जस्तो सामग्रीमा तोड्न प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाको प्रयोग गर्दछ। एक पटक यी पाउडर गरिएको मलहरू माइक्रोबियल ऊर्जा उत्पादन प्रणालीमा स्थानान्तरण गरिसकेपछि त्यसलाई मिथेनमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ जुन ऊर्जाको स्रोत हो । ” मलबाट ऊर्जा बनाउनु भविष्यको प्रविधि हो। यसले वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, “आविष्कारक चो जे-वेनले…
नेप्सेमा सुस्तायो कारोबार
सोमबार नेप्से परिसूचक २७०० को आसपास तलमाथि गर्दा बजार खुलेको २ घण्टा सम्ममा करिब १ अर्बको कारोबार भएको छ। सर्वाधिक कारोबार गर्नेमा जिवन विकास लघुवित्त, नेपाल टेलिकम र शिभम सिमेन्ट रहेका छन् भने सर्वाधिक लाभ गर्नेमा युनाइटेड मार्दी हाइड्रो पावर कम्पनी छ जसले सर्किट लेवलमा कारोबार गरेको छ।
तुफानजस्ता उद्धमी आनन्द राज बतास
आनन्द राज बतासको जन्म ३० अक्टोबर १९६७ मा भएको हो । उनी एक नेपाली व्यवसायी तथा परोपकारी हुन् । उनी बतास अर्गनाइजेशनका वर्तमान अध्यक्ष हुन् । बतास एक कङ्ग्लोमरेट कम्पनी हो जसमा ११ सहायक कम्पनीहरू रहेका छन्। व्यापार बाहेक उनी बिभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा समेत आवद्ध रहेका छन् । उनीद्वारा स्थापित बातास फाउन्डेसन सामाजिक कल्याणका लागि काम गर्दछ र उनी अक्सर मानवीय प्रतिक्रिया, आजीविका, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, राहत, शिक्षा आदि क्षेत्रमा योगदान गर्छन्। आनन्द राज बतास भन्छन्, ” म यहाँसम्म आउनुमा म एकदम धनि र समृद्ध परिवारबाट भएको हुनाले होइन । मेरो बुवाले बिजनेसको जग बसाल्दिनु भएको भने जरुर हो । तर,…
बैंकहरुलाई जलविद्युत र उर्जामा तोकिएको ऋण सीमा पुर्‍याउन सकस
वाणिज्य बैंकहरुले जलविद्युत तथा उर्जामा तोकिएको ऋण सीमा पुर्‍याउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुले १५ प्रतिशत ऋण पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार २०७८ असारमै ११ प्रतिशत पुर्‍याउनुसक्नुपर्छ भने आउँदो २०७९ असार मसान्तमा १३ र २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेछ । २०७८ पुससम्म बैंकहरुले १२.९६ प्रतिशत ऋण पुर्‍याइसकेका छन् । सरकारी स्वामित्व बाहेकका २४ बैंकले ११.८३ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । उर्जा क्षेत्रतर्फ गत असार मसान्तमा ६ प्रतिशत पुर्‍याइसक्नु पर्ने व्यवस्था थियो । पुस मसान्तसम्म जम्मा ५.७६ प्रतिशत मात्र पुर्याएका छन् । आउँदो २०७९ असार मसान्तमा ७, २०८० असार मसान्तमा ९ र २०८१ असार मसान्तमा ११ प्रतिशत…
हिमालयन एसेन्स प्रा.लि.मा रोजगारीको अवसर
हिमालयन एसेन्स प्रा.लि.ले भारी मात्रामा रोजगारीको अवसर खुलाएको छ । कम्पनीको रोजगारी विज्ञापन यस प्रकार छ: पदः बजार प्रतिनिधिसंख्या: १०योग्यताः +२ व सो सरहड्राईभिङ लाइसेन्स/ साधन स्वामित्त्वः २- पांग्रे सवारी (साधन भएको उम्मेद्वारलाई विशेष ग्राहयता दिइनेछ) यस पदको लागि आवेदन दिन info@himalayanessence.com.np इमेल ठेगानामा आफ्नो बायोडाटा मेल गर्न सकिन्छ । स्थानः सेन्ट्रल बिज्नेस पार्क , थापाथली काठमाण्डौं, नेपालफोन नः९८०३००९२०९९
बैंकहरुको ब्याजदर बढ्दो गतिमा
बैंकको ब्याजदर निरन्तर बढ्दै गएको छ । विगत एक वर्षको तथ्याङकलाई आधार मान्दा ९१ दिने ट्रेजरी बिल, वाणिज्य बैंककहरुको अन्तरबैंक ब्याजदर, कर्जाको भारित औसत ब्याजदर, निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर र आधार दर निकै बढेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एक वर्षको अवधिमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर ४८२.७५ प्रतिशतले बढेको छ । गत पुसमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर ०.८७ प्रतिशत रहेको थियो । एक वर्षको अवधिमा यो ४८२.७५ प्रतिशतले बढेर ५.०७ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको अन्तरबैंक ब्याजदर ३ हजार ३०० प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको पुस मसान्तमा ०.१४ प्रतिशत…
आईपीओ निष्काशनको तयारीमा रहेका २६ कम्पनी
सर्वसाधारणको लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशनको लागि अनुमति माग्दै २६ कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । हालसम्म २६ कम्पनीहरुले ७ अर्ब बढीको आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति माग्दै बोर्डमा आवेदन दिएका हुन् । बोर्डका अनुसार २० वटा हाइड्रोपावर कम्पनी,३ वटा माइक्रोफाइनान्स,२ वटा जीवन बीमा कम्पनी र १ वटा अन्य समुहका कम्पनीले ७ अर्ब २६ करोड ६९ लाख २८ हजार ९०० रुपैयाँ बराबरको ६ करोड ५९ लाख ४९ हजार २८९ कित्ता शेयर निष्काशनको लागि आवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये २० वटा हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले ५ अर्ब ८ करोड ४१ लाख ७७ हजार ४०० रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ८ लाख ४१ हजार…